Virtual Press Briefing on ILO Convention 138
DIILM update 3# - DIILM စီမံကိန်းအနေဖြင့် ပြည်ပလုပ်သားရွှေ့ပြောင်း သွားလာခြင်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် မူဝါဒဆိုင်ရာမူဘောင် ခိုင်မာအားကောင်းစေရန် အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန(MOLIP)၊ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်(MOEAF)၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်
Policy Coherence for Development: Gender Equality and Women’s Empowerment in Labour Migration Governance in Myanmar
This paper provides an overview of the legal framework and actors involved in governing migration, gender equality, and women’s empowerment in Myanmar, and examines examples of gaps in the design and implementation phases of the policy cycle that affect women migrant workers in particular. Invisibility isakey issue: large numbers of women migrant workers, particularly domestic workers, are engaged in sectors that are not covered by labour law and migrate through irregular channels. At the same time, gender discrimination is not defined in Myanmar legislation, despite the presence of policy objectives to advance gender equality. This triple invisibility leaves women more vulnerable to abuse and exploitation and less able to proactively achieve goals.
အာရှ ေဒသအတွင်း တာဝန်ယူမှုရှိေသာ ထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိမှု လုပ်ငန်းကွင်းဆက်များ- မြန်မာနုိင်ငံ
အိမ်အကူအလုပ်သမားများအတွက် သင့်လျော်ကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင် လက်တွေ့ ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း
DIILM Update #2 အိမ်အကူအလုပ်သမားများ၊ အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၀
Myanmar Guide to Comprehensive International Labour Standards on Social Security
International labour standards are increasingly important in times of economic and social crisis. Significantly, standards relating to social security guarantees income security and health protection with benefits to ensure people have access to medical care and health services throughout their life. Social security is critical to increasing resilience, alleviating poverty and isastabilizing economic force.
ကိုဗစ်နိုင်တင်း ကမ္ဘာ့ကပ်ရာဂါကာလအတွင်း DIILM စီမံကိန်းအနေဖြင့် ရွှေ့ပြောင်း သွားလာသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို တုံ့ပြန် ဖြည့်ဆည်း‌ ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ
DIILM Update #1 ကိုဗစ်နိုင်တင်း တုံ့ပြန် ဆောင်ရွက်မှုများ၊ စက်တင်ဘာလ ၂၀၂၀
DIILM’s responses to the needs of migrants during the Covid-19 pandemic
DIILM Update #1 Covid-19 Response, September 2020
For Journalists: An introduction to the Responsible Supply Chains in Asia (Myanmar) programme
This document containsabrief summary of key elements of the RSCA programme
ໂຄງການຮ່ວມມື ILO-China ການສູ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ໃນປະເທດກາປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ມູ້ຽນມູ້າ (SSTC)
အိုင်အယ်(လ်)အို စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် COVID – 19 ကိုရိုနာ ဗိုင်းရပ်စ် (မေးလေ့ရှိသော မေးခွန်းများ)
နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားရေးရာစံချိန်စံညွှန်းများသည် မျှတပြီး သာတူညီမျှမှုရှိသော မူဘောင်တစ်ရပ်ကို ချမှတ်ပေးပြီး၊ အလုပ်အကိုင်ဝန်းကျင်လောကရှိ ခိုင်လုံသောအခြေအနေများတွင် ဒဏ်ခံနိုင်မှုကို အထင်အရှားပေါ်လွင်စေလျက်၊ COVID–19 အပါအဝင် ကပ်ရောဂါဆိုးများကို အချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့် ရေရှည်တုံ့ပြန်ရာ၌အခြေခံကျလှသည်။
Women in Business and Management: Enterprise Survey Report
The International Labour Organization, in partnership with the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI), implemented an Enterprise survey in Myanmar which contributes to the 2019 global report on Women in Business and Management: produced by the Bureau for Employers’ Activities (ACT/EMP).